Mila Manome Toky Amin’ny Fanajana Ny Tontolo Iainana Ireo Mpitsidika an’i Palau Amin’Izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 17:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, македонски, Español, Nederlands, Română , Português, বাংলা, polski, Български, bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, čeština , English
Ireo mpitsidika ny Palau ihany koa dia asehon'ny lahatsary mandritra ny sidina izay mitantara ny tantaran'ilay goavambe nampianarin'ny ankizy mba hanaja ny tontolo iainana. Sary avy amin'ny tranonkala ‘Palau Pledge’.
Mba hampiroboroboana ny fanajana ny tontolo iainana, takian'ny governemantan'i Palau ankehitriny ny mpizahatany mba hanasonia fifanekena ara-tontolo iainana amin'ny pasipaorony alohan'ny hanomezana visa azy ireo rehefa tonga any an-toerana. Voalaza fa ny fandaharan'asa, fantatra amin'ny anarana hoe “Fanomezan-toky Palau,” fa izy ity no fanovàna voalohany mifandraika amin'ny fifindra-monina eto amin'izao tontolo izao natao hiarovana ny tontolo iainana.
Vondro-nosy kely iray any amin'ny faritra andrefan'ny Pasifika i Palau. Manana mponina miisa 20 000 eo ho eo izy, saingy mpizaha tany maherin'ny 160.000 no mitsidika ny firenena isan-taona.
Ny 6 desambra 2017, namoaka didim-panjakana manery ny manampahefana misahana ny fifindra-monina mba hampiasa ny “Fifanomezan-toky ao Palau” amin'ny takelaky ny visa ny filohan'i Palau, Tommy Remengesau. Mitanisa ny fiantraikany ratsy amin'ny “fizahan-tany tsy misy drafitra, ny fiovan'ny toetr'andro, sy ireo fandrahonana hafa maoderina” eo amin'ny tontolo iainan'ny firenena ny didy hitsivolana ka nitarika ny governemanta hanangana ny fifanekena amin'ny fampiroboroboana “fizahan-tany ary saina.”
Ity ambany ity ny lahatsoratra momba ny fifanekena vosoratra ao amin'ny pasipaoro:
Zanak'i Palau, ekeko ny fifanekena, amin'ny maha-vahiny ahy, mba hiaro sy hitandro ny nosinareo tsara tarehy sy tsy manam-paharoa. Mivoady aho mba hitandrina, tsy hanao herisetra ary hizaha amim-pitandremana. Tsy haka izay tsy nomena ahy aho. Tsy hanisy ratsy izay tsy manisy ratsy ahy aho. Ny dian-tongotra izay azo fafana ihany no hany sisa havelako .
Ny soratra amin'ny pasipaoro momba ny ‘Fifanekena ao Palau’. Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny fandaharan'asa.
Ilay mpilalao sarimihetsika ao Hollywood Leonardo DiCaprio no iray tamin'ireo naneho ny fanohanany ny fandaharan'asan'i Palau mba hamonjena ny tontolo iainana.
Mirehareha aho manohana ny Fifanomezan-toky ao Palau, hetsika fiarovana ny tontolo iainana vaovao ho an'ireo mpitsidika. Nosoratana tamin'ny fanampian'ny zanak'i Palau, tokony hanome toky ny mpitsidika rehetra fa hanasitrana sy hiaro ny tontolo voajanahary ho an'ny taranaka hoavy. Fantaro bebe kokoa ao amin'ny https://t.co/UE96LkATZ6. pic.twitter.com/Gxjonhlkx8
Ankoatra ny fanasoniavana ny fifanomezan-toky, aseho horonantsary ihany koa ireo mpitsidika rehefa any anaty sidina izay milaza ny tantaran'ilay ” goavana tsy mivaky loha sy tsy miraharaha – maneho ny ankamaroan'ny fizahan-tany amin'ny endriny ratsy indrindra – izay tonga tany Palau, ka nanimba ny tontolo iainana.” Tsy ela ilay goavana dia resy lahatry ny ankizy tao Palau mba hiahy bebe kokoa momba ny tontolo iainana. Nampahatsiahivana azy ny momba ny tokony hitandremany ny fihetsiny mba tsy hanimbana ny haran-dranomasina, handoto ny rano na hanompa ny kolontsaina ao an-toerana.
Nolazain'ny tatitry ny vaovao isan-karazany ho toy ny fandaharan'asa hafa kely ny “Fifanomezan-toky ao Palau”. Manantena ny Filoha Remengesau fa hampiasa ny hetsika mitovy amin'izany ihany koa ireo firenena hafa. Nilaza izy fa tsara ny valinteny azo avy amin'ny mpizaha tany:
Nanara-maso ny seranam-piaramanidina izahay, nandinika ny fanehoan-kevitra avy amin'izy ireo, ary nilaza avokoa ny rehetra fa tsy fantatr'izy ireo fa efa nisy izany torohevitra na zava-misy izany teo aloha.
Naniry ny fanohanana ny fandaharan'asa hafa avy amin'ny hetsika hafa izay mety hitondra fiantraikany bebe kokoa ao an-toerana ny mpisera Twitter iray:
Tena mahafinaritra be! Eny manoloana ny Fifanomezan-toky ao Palau. Manontany tena aho hoe ahoana ny fomba hanatanterahana izany ao an-toerana – Tsara ny fifanomezan-toky nefa misy ve ny fampianarana miaraka amin'izany?
Marina tokoa izany ahiahy izany satria mikasa ny hanomboka ny fandaharam-pampianarana vaovao ho an'ireo mpianatra izay “hanampy amin'ny fanentanana ny fiahiana ny tontolo iainana amin'ireo mpitondran'ny hoavy sy ny fitsipika ara-barotra miahy izany ao amin'ny sehatry ny fizahan-tany” i Palau.
Ankoatra izany, manana toera-masinaan-dranomasina mirefy 500.000 kilaometatra toradroa i Palau izay voarara ny fanjonoana ara-barotra sy ny fitrandrahana solika.
Tsy ho an'ny mpizahatany tonga ao amin'ny firenena ihany ny “Fifanomezan-toky ao Palau” fa afaka manasonia ny fifanomezan-toky ao amin'ny tranonkalan'ny fandaharan'asa ihany koa ireo mpisera aterineto. Hatramin'ny fotoana nanoratana, olona miisa 18.598 no efa nanao sonia ny fifanomezan-toky, anisan'izany ny mpanoratra .
Fifanomezan-toky ao Palau. Nosoniavin'i Mong.